Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Sidee masiibadu u beddeshay waxbarashada martigelinta?
Faafida ayaa saameysay warshado kasta iyo warshadaha soo dhaweynta ayaa ah kuwa ugu dhaqsaha badan ee ka jawaaba isbedelada ka dhacaya adduunka oo dhan. Dabeecadda soo -jireenka ah ee adkeysiga iyo la -qabsiga ayaa muujisay xaaladda masiibada. Astaamaha martigelinta ee hogaaminaya ayaa sidoo kale ku soo kordhaya aagag sida hawlgallo, taasoo keentay dhismayaal khafiif ah oo kharash badan. Waxaa jira is -dhexgal farsamo oo badan oo ku jira summadahan oo waxay noqonayaan kuwo hal -abuur leh.
Dr Suborno Bose, Guddoomiyaha iyo Madaxa Mentor ee IIHM, ayaa muddo dheer ka hor ka wada hadlay fursadaha shaqo ee suurtogalka ah ee ardayda ka baxda machadyada tababarka martigelinta. Maanta, masiibada ayaa kaliya kordhisay fursadaha ardayda ka soo qalin jabisay hoyga waxayna IIHM horseed u tahay tababarka ardayda iyo u diyaarinta warshadaha. Dr Bose wuxuu rumeysan yahay in dunidii ka dambaysay masiibada ay fursado u abuuri doonto hamiyeyaasha warshadaha waxayna dalban doontaa in si weyn loo fahmo aagagga maalmahan si aad ah muhiim ugu noqonaya sida horumarka farsamada ee qeybta martigelinta.
Dunida masiibada ka dib waxay u abuuri doontaa waddooyin cusub oo lama filaan ah ardayda martigelinta ah. Warshaduhu waxay dalban doonaan in si weyn loo fahmo aagagga sida xalalka farsamada, moodooyinka adeegga taabashada hooseeya, maareynta musiibada, qorshaynta hawlgal firfircoon iyo dib-u-noqoshada lama filaanka ah. Iyada oo dalabaadkaas oo kale ah, baahida loo qabo xirfadleyda soo dhaweynta xirfadaha ayaa sii kordheysa. Sidaa darteed, waxbarashadu waxay sidoo kale yeelan doontaa ardayda geesinimada leh xirfadaha ka dhigi doona kuwo wax-ku-ool ah oo diyaar u ah mustaqbalka, Soo-dhoweynta xirfad ahaan waxay sii ahaan doontaa mid firfircoon, baahi badan oo xiiso leh.
Waxbarashada soo -dhoweynta waxaa ka mid ah tababarro badan oo wax -ku -ool ah iyo soo -gaadhis iyo IIHM waxay bixisaa labadan si loo xaqiijiyo horumarka guud ee ardayda. In kasta oo IIHM ay u tababarayso inay soo galaan suuqa shaqada ee warshado kala duwan, waxay sidoo kale ku dhiirrigelisaa inay bilaabaan howlahooda gaarka ah meel kasta oo ay xiiseeyaan. Waxay kaloo leedahay unug horumarineed oo ganacsade oo gaar ah oo la yiraahdo SAHAS. Tani asal ahaan waa sanduuq lacageed oo laga helo halka ardayda sida dhabta ah ugu dhiirran inay bilaabaan howlahooda gaarka ah loo qoondeyn karo raasamaal ganacsi. Waa inay soo gudbiyaan qaab ganacsi oo la taaban karo oo la gaari karo si ay awood ugu yeeshaan inay ka faa'iidaystaan ​​tas -hiilaadka SAHAS.
Xaaladda masiibada waxay dhalisay dhallinyaro badan oo la yaaban waxay ku samayn doonaan xirfaddooda. Si kastaba ha noqotee, arday badan oo IIHM ah ayaa bilaabay howlahooda gaarka ah intii lagu jiray xirida masiibada Covid-19 walina waxay si guul leh u maamulayaan ganacsigooda. IIHM waxay bixisaa jawi ku habboon iyo nidaam taageero halkaas oo ay ardaydu dareemaan dhiirigelin iyo kalsooni si ay riyooyinkooda iyo fikradahooda u noqdaan kuwo dhab ah.
IIHM waxay samaysay sanduuq lacageed iyada oo loo marayo hindise la yiraahdo SAHAS. Fikradda ayaa ah in lagu dhiirrigeliyo ardayda inay bilaabaan howlahooda gaarka ah IIHM -na waxay ku taageeri doontaa fikraddooda SAHAS. Hindisahaani wuxuu ku dhiirrigeliyay arday badan inay hal -abuurnimo sameeyaan inta lagu jiro xannibaadda oo ay bilaabaan bilowgooda.
Xirfadaha aadka loo rabo suuqa maanta waa xirfadaha jilicsan. Daabacado badan oo cilmi-baaris ah iyo mufakiriin ayaa saadaaliyay in dunidii ka dambaysay masiibada ay si dhab ah xoogga u saari doonto xirfadaha jilicsan. Tani waxay ka dhigan tahay kor u qaadista xirfadaha aadanaha oo aad muhiim ugu ah warshadaha martigelinta sidoo kale.
IIHM waxay ka caawisaa ardayda inay fahmaan oo ay bartaan awoodda xirfadaha jilicsan. Markay ardaydani soo saaraan waddooyinkooda xirfadeed, xirfadahaan jilicsan waxay u noqon doonaan qodob muhiim u ah mustaqbalkooda waxayna ka dhigi doonaan kuwo adkaysi leh oo la qabsan kara, kobcin doona awoodda beddelidda fikradaha, la dagaallanka hubin la'aanta iyo aasaasidda kalsoonida. Astaamahani waxay iyaga ka caawin doonaan mustaqbalka dhow iyo kan fog intaba iyagoo sahaminaya fursadaha iyo dariiqyada cusub ee adduunyada masiibada kadib.
Intii uu socday aafadu, IIHM waxay isku dayday inay dhiirigeliso ardayda, macalimiinta iyo sidoo kale shaqaalaha. Ilaalinta xiriir joogto ah oo joogto ah oo lala yeesho ardayda si loo fahmo baahidooda iyo caqabadaha ayaa ka caawineysa inay ku xirnaadaan howlaha waxbarashada iyo xerada iyada oo loo marayo dhexdhexaadinta internetka. Sanadkii la soo dhaafay, xafladda kulleejyada ee ay soo qabanqaabisay IIHM, Rigolo, ayaa lagu qabtay madal onlayn ah halkaas oo ardayda lagu dhiirrigeliyay inay ka qaybgalaan oo ay soo bandhigaan kartidooda.
Markii hirarkii ugu horreeyay ay ku dhufteen 2020 oo ummaddii oo dhami ay gashay xannibaad, IIHM waxay ka mid ahayd hay'adihii ugu horreeyay ee go'aansaday inay sii wadaan geeddi -socodka waxbarashada iyagoo adeegsanaya khadka tooska ah. Tan iyo markii aan haysanay tiknoolajiyadeena, waxaan isla markiiba bilaabi karnaa fasalada. Si kastaba ha ahaatee Dr Bose wuxuu tilmaamay in IIHM ay leedahay asal fasallo dalwadnimo ah maadaama dhowr cunno -kariye oo caalami ah iyo khubaro soo -dhoweyn ah ay inta badan horay u qaateen casharo online ah. Markaa tani waxay ahayd fursad kale oo sahaminta dhaqamada barashada da'da-cusub.
Fahamka khaldan ee caadiga ah ee ah in soo dhoweynta ay la xiriirto hoteellada oo keliya ayaa la caddaynayaa waana sida ay IIHM u hormarineyso waxbarashadeeda. Waxaa jira adduunyo fursado ah oo sugaya ardayda martigelinta iyo IIHM waxay si joogto ah ugu dhiirrigelisaa ardayda inay sahamiyaan fursado ganacsi iyo kuwo ganacsi oo badan. Ardayda martigelinta ah ayaa baahi u qaba warshado kala duwan sida safarka, maareynta dhacdada, bangiyada, daryeelka caafimaadka, hantida maguurtada ah ee aadka u sareysa, tafaariiqda raaxada, duulista, doonyaha iyo kuwo kale oo badan. Shaqooyinkaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshaha shaqooyinka waxayna sidoo kale oggolaadaan hal -abuurka iyo is -dhexgalka shaqsiyeed. Ardayda cuntada, sidoo kale, waxaa la baraa mihnadda ganacsi iyo karti ganacsi oo ku qalabeeya aasaaska markaa u diyaargarooba meheradaha mustaqbalka.
Aragtida IIHM waa in waxbarashada martigelinta la gaarsiiyo heer ka duwan gabi ahaanba taas oo u diyaarin doonta ardayda maanta warshadaha iyo meheradaha berri. Hoggaaminta isbeddelka iyo u diyaarinta ardaydeeda caadi cusub oo dunida weligeedba beddelay labadii sano ee la soo dhaafay. Sahaminta suurtagalnimada waxbarashada martigelinta taas oo ah sababta barnaamijka is -wehelinta FIIHM oo ay ku jiraan dhammaan hawlwadeennada warshadaha iyo khubarada kuwaas oo la talin doona oo la wadaagi doona waayo -aragnimada warshadaha ardayda. Xarun loogu talagalay cilmi -baarista dalxiiska oo ah baahida saacadda ayaa sidoo kale la qorsheeyey si waxbarashada martigelinta ay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmaan daraasadaha dalxiiska.
DR Suborno Bose Maamulaha Dugsiga IIHM Hotel wuxuu hormuud ka yahay machadka isagoo hiigsanaya oo la jaanqaadaya waxbarashada sidii caadiga ahayd ee cusub taas oo iyaduna ah baahida saacadda.